Igama elithi "idioplomacy ye-athomu" libhekisela ekusebenziseni kwesizwe isongelo semfazwe yenyukliya ukufezekisa iinjongo zalo zomgaqo-nkqubo kunye nolwamanye amazwe . Kwiminyaka elandela uvavanyo lwayo lokuqala lwempompo ye-atomic ephumelelayo ngo-1945 , urhulumente waseburhulumenteni waseUnited States wayefuna ukusebenzisa isixhobo senu samandla enyukliya njengesixhobo sokungabikho komkhosi.
Imfazwe Yehlabathi II: Ukuzalwa kweNyukliya
Ngexesha leMfazwe Yehlabathi II , iUnited States, iJamani, i-Soviet Union kunye ne-Great Britain zaphanda i-bhomu ye-athomu ukuba isebenzise njenge "sixhobo esiphezulu." Kodwa ke, ngo-1945, kuphela i-United States yavelisa ibhomu esebenzayo.
Ngo-Agasti 6, 1945, iUnited States yaqhuma ibhomu ye-athomu kwiJapan yaseJiroshima. Ngemizuzwana, ukuqhuma kwandiswe kwi-90% yesixeko kwaye kwabulawa abantu abangama-80,000. Kwiintsuku ezintathu kamva, ngo-Agasti 9, i-US iyanqabile ibhomu yesibini kwi-Nagasaki, yabulala abantu abangama-40,000.
Ngomhla ka-Agasti 15, 1945, uMbusi waseJapan uHirohito wamemezela ukuzinikela kwakhe kwesizwe ngokubhekiselele kwinto awabiza ngokuthi "ibhokhwe entsha kunye neyona ntsholongwane." Ngaphandle kokuziqonda ngelo xesha, uHirohito wayememezele nokuzalwa kwezivumelwano zenyukliya.
Ukusetyenziswa kokuqala kweDatomic Diplomacy
Ngelixa igosa lase-US lisetyenzisile ibhomu le-athomu ukuze liphoqe iJapan ukuba lizinikezele, liye laqwalasela indlela amandla amakhulu okubhubhisa izixhobo zenyukliya angasetyenziselwa ukuqinisa inzuzo yesizwe kwimibutho yezobudlelwane bobudlelwane bobudlelwane beSoviet Union.
Xa uMongameli wase-United States uFranklin D. Roosevelt avumile ukuphuhlisa ibhomu ye-athomu ngo-1942, wagqiba ekubeni angaxeleli iSoviet Union malunga neprojekthi.
Emva kokufa kukaRovelvelt ngo-Ephreli 1945, isigqibo sokuba ukugcina isithethi se-US yezixhobo zamandla enyukliya yawa kuMongameli uHarry Truman .
NgoJulayi 1945, uMongameli uTruman, kunye neNkulumbuso yeSoviet uJoseph Stalin , kunye noNdunankulu waseBrithani uWinston Churchill badibana kwiNgqungquthela yasePotsdam ukuthetha ngokulawula ulawulo lukaRhulumente waseJamani eJamani kunye namanye amagama ekupheleni kweMfazwe Yehlabathi II.
Ngaphandle kokudalula iinkcukacha ezithile malunga nesixhobo, uMongameli uTuruman ubhekisele kubukho bombhobho owonakalisayo kuJoseph Stalin, inkokeli yokukhula kunye nokwesaba iCommunist Party.
Ngokungena kwimfazwe yaseJapan phakathi no-1945, i-Soviet Union yazibeka kwindawo yokudlala indima echaphazelekayo ekulawuleni ngokulandelelana kwemfazwe yaseJapan. Ngelixa ama-US amagosa athola inkokheli e-US, kunokuba asebenze ngokuhlanganyela e-US-Soviet, baqonda ukuba akukho ndlela yokukhusela.
Abenzi bomgaqo-nkqubo base-US babesaba ukuba iiSoviets zingasebenzisa ubukho bezopolitiko kwiminyaka emva emva kwemfazwe yaseJapan njengesiseko sokusasaza i-communism kulo lonke elase-Asia naseYurophu. Ngaphandle kokusongela iStalin ngebhomu le-athomu, uTruman wayeyilindele ukulawula okuthe ngqo kweMelika ngezixhobo zenuzi, njengoko kuboniswe yiibhomu zeHiroshima kunye neNagasaki ziza kwenza iiSoviets ziphinde zihlolisise izicwangciso zazo.
Ngomnyaka we-1965 incwadi ethi Atomic Diplomacy: UHroshima noPotsdam , umbhali-mlando uGar Alperovitz uxela ukuba i-atomic yeTomuman kwintlanganiso yasePotsdam yaba ngowokuqala kwidibano yokudibanisa i-athomu. UAlperovitz uxela ukuba ukuhlaselwa kwezixhobo zenukliya kuHiroshima naseNagasaki kwakungekho mfuneko yokunyanzela amaJapane ukuba anikezele, iibhobho zenzelwe ukuba zithinte i-diplomacy emva kwezempi kunye neSoviet Union.
Kodwa-ke ezinye iimbali-mlando, ziphikisa ukuba uMongameli uTruman wayekholelwa ngokwenene ukuba i-Hiroshima ne-Nagasaki ibhomu ibingelwa ukunyanzelisa ukunikezelwa kweJapan kwangaphandle. Ngenye indlela, baxabana bebeyinto yokuhlasela yaseJapan ngokwenene kunye neendleko ezinokubakho kwezigidi zobomi obambene.
US Covers Western Yurophu 'neNyukliya Umbrella'
Nangona ukuba izikhulu zase-US zithembele ukuba imimiselo yaseHiroshima neNagasaki yayiza kusasaza iDemokhrasi kunokuba iCommunism kulo lonke elaseMpuma Yurophu naseAsia, zadimazeka. Kunoko, isongelo sezixhobo zenuzi zenze i-Soviet Union ibe neenjongo ngakumbi ekukhuseleni imida yawo kunye nommandla okhuselekileyo wamazwe alawulwa ngumkhomanisi.
Nangona kunjalo, ngexesha leminyaka yokuqala yokuqala emva kokuphela kweMfazwe Yehlabathi II, ukulawulwa kwezixhobo zenukliya eMelika kwakuphumelele kakhulu ekudaleni imibutho ehlala eYurophu yaseNtshona.
Ngaphandle kokubeka inani elikhulu lemikhosi ngaphakathi kwemida yabo, iMelika inokukhusela iintlanga zaseNtshona Koloni phantsi kwe "sambuli-nyukliya" yayo, into eyayisenayo iSoviet Union.
Ukuqinisekiswa koxolo eMelika kunye nabalingani bakhe phantsi kwe-ambulance enyukliya kungekudala kuya kugubungqiswa, nangona kunjalo, njengoko i-US ilahlekelwe yinto yokulawula izixhobo zenyukliya. I-Soviet Union iphumelele ukuvavanya ibhomu yokuqala ye-athomu ngo-1949, i-United Kingdom ngo-1952, eFransi ngo-1960, kunye neRiphablikhi yabantu baseChina ngowe-1964. Ebonakala ingozi ukusuka eHiroshima, iMfazwe yeCold yayiqalile .
IDolom War I Diplomacy
Bobabini iUnited States kunye neSoviet Union babesetyenziselwa ukudibanisa i-atomic diplomacy phakathi kweeminyaka ezimbini zokuqala zeMfazwe yeCold.
Ngowe-1948 no-1949, ngexesha lokwabelwana ngokubambisana kweJamani, i-Soviet Union yavala i-US kunye namanye ama-Allied Western ngokusebenzisa zonke iindlela, umzila womzila, kunye nemijelo ekhonza kakhulu eBerlin West. UMongameli uTruman wathintela ukukhutshwa ngokumisa amabhomu amabhomu angama-B-29 athi "ayenokuba" athatha ibhomu zenyukliya ukuba zifunwa kwii-airbases zase-US kufuphi neBerlin. Nangona kunjalo, xa iiSoviet zange zingabuyi phantsi kwaye zinciphise i-blockade, i-US kunye ne-Western Allies zenza i- Berlin Airlift yembali eyenza i-food, iyeza kunye nezinye izinto zokuncedisa abantu baseNtshona Berlin.
Kungekudala emva kokuqala kweMfazwe yaseKorea ngo-1950, uMongameli uTruman wabuye wasebenzisa i-B-29s eyilungiselelo lwenyukliya njengombonakalo kwiSoviet Union yase-US ukuzimisela ukugcina intando yeninzi kuloo mmandla. Ngowe-1953, ngasekupheleni kwemfazwe, uMongameli uDwight D. Eisenhower wayeqwalasele, kodwa wakhetha ukuba angasebenzisi idioplomacy ye-athomu ukuze athole inzuzo ekuxoxweni ngonxibelelwano.
Kwaye ke amaSoviets aguqulela ngokutsha iitafile kwiCrisis of Missile Crisis, imeko ebonakalayo neyingozi ye-diplomacy ye-athomu.
Ephendula kwi- Bay of Pigs eyahlulekayo Ukuhlasela kwe-1961 kunye nobukho be-nyukliya yase-US eTurkey nase-Italy, inkokheli yeSoviet uKitita Khrushchev yathumele imikhosi yenyukliya eCuba ngo-Oktobha 1962. UMongameli we- US uJohan F. Kennedy waphendula ngokumisela ukukhusela ukukhusela ezongezelelweyo izibhamu zaseSoviet zokufikelela eCuba kwaye zifuna ukuba zonke izixhobo zenukliya ezisele kwisiqithi zibuyiselwe kwiSoviet Union. I-blockade yavelisa ixesha elininzi njengoko iinqanawa ezazikholelwa ukuba ziphethe izixhobo zenyukliya zaye zabhekana nazo zaphendulwa yi-US Navy.
Emva kweentsuku ezili-13 zokunyusa iinwele ze-atomic diplomacy, uKennedy noKhrushchev bafikelela kwisivumelwano esinokuthula. AmaSoviets, phantsi kolawulo lwase-US, adiliza izixhobo zenukliya eCuba aze awathumele ekhaya. Ngenxa yoko, iUnited States ithembisa ukuba ayiyi kuphinda ihlasele iCuba ngaphandle kokukhwabanisa impi kwaye isuse iinqwelo zayo zenyukliya eTurkey nase-Italy.
Ngenxa yeCrisis Crusy Missile, i-US yayimisele imimiselo yokurhweba kunye nokuhamba kwiCuba eyaqhubeka isebenza kwaze kwaba yinto eyenziwe nguMongameli uBarack Obama ngo-2016.
Ihlabathi le-MAD libonisa ubuNtu boBuchule be-Atomic Diplomacy
Ngomnyaka wee-1960, ubuqhetseba obugqithisileyo bokudibanisa i-athomu kwabonakala. Izixhobo zenyukliya zezixhobo ze-United States kunye neSoviet Union zaye zalingana ngokulinganayo kunye nobukhulu obuyingozi. Enyanisweni, ukhuseleko lweentlanga zombini, kunye nokugcinwa kokuthula emhlabeni jikelele, lwaxhomekeke kumgaqo we-dystopian othi "ukutshabalaliswa ngokuqinisekileyo" okanye i-MAD.
Ekubeni ama-United States kunye neSoviet Union babesazi ukuba nayiphi na isitekliya se-nyukliya esipheleleyo iya kubangela ukubhujiswa ngokupheleleyo kwamazwe omabini, isilingo sokusebenzisa izixhobo zenukliya ngexesha lokuxabana sancipha kakhulu.
Njengombono karhulumente kunye nezopolitiko ngokubhekiselele ekusebenziseni okanye nokuba kusetyenziswe izixhobo zenyukliya kweso sikhuphukile kwaye kwandula kakhulu, imingcele ye-diplomacy ye-athomu yacaca. Ngoko ngelixa lingaqhelekanga lwanamhlanje, idiplomacy ye-athomu mhlawumbi yathintela imeko ye-MAD ngezihlandlo eziliqela ukususela kwiMfazwe Yehlabathi II.
Izikolo zeSten kunye nokuSebenza kwazo kwiSigaba sokuVavanywa koVavanyo